Onye mmeri anyị maka njikwa ụlọ ọrụ Agency: Brightpod | Martech Zone
Onye mmeri anyị maka njikwa ọrụ Agency: Brightpod
Tuesday, October 1, 2013 Douglas Karr
Enweghị ụkọ ngwanrọ njikwa njikwa na ahịa - nke ahụ bụ ihe dị mma. Ọ na - enye ụlọ ọrụ ọ bụla ohere iji PMS nwalee usoro ya na nyiwe ndị ọzọ iji hụ ma ọ dị mma. Ndị ụlọ ọrụ ekwesịghị ịgbanwe usoro ha maka PMS, PMS kwesịrị ịkwado usoro ahụ. Edeela m banyere iwe m Usoro Nhazi oru n'oge gara aga… ọtụtụ n'ime ha ghọrọ ọrụ karịa ka ha nyeere aka.
Mgbe ọnwa ole na ole nwalechara nyiwe dị iche iche, anyị emechaa njem anyị niile Brightpod. Ọ dị ka ndị folks na Brightpod nọ na-arụsi ọrụ ike iji nye usoro nhazi njikwa ọrụ nke na-elekọta ụlọ ọrụ (mana onye ọ bụla nwere ike iji ya). Njirimara anyị mechara nwere ike ọ gaghị adị mkpa na ụlọ ọrụ gị, mana ihe meriri anyị bụ atụmatụ mmeri atọ: arụ ọrụ (yana kalenda ederede), arụ ọrụ ugboro ugboro, na Mwepu Dropbox / Google Drive!
Ikpo okwu a abụghị maka ọrụ, ị nwekwara ike ijikwa, rụkọta na ịtọọ oge ọdịnaya iji bipụta ya na Brightpod.
Lelee Pods gị
Lelee Ọrụ na Pods gị
Jikwaa ma Kenye Ọrụ
Na-ebute Ọrụ Ndị Ọrụ ụzọ
Lelee ihe ndị ka mkpa
Lelee Kalinda Editorial gị
Kwurịta ma rụkọta ọrụ ọnụ
Archive okenye Pods
Brightpod dịkwa oke ọnụ, bido na $ 19 kwa ọnwa maka 10 pọd na ndị ọrụ 6!
Tags: ụlọ ọrụ pmsbrightpodPCngwanrọ njikwa oru
FlockTag: Usoro Iguzosi Ike n'Ihe Nile nke Universal na Amamihe Amamihe
Ọkt 1, 2013 na 12:17 PM
Daalụ Doug! Obi ụtọ Brightpod na-egosi na ọ bụ ihe bara uru maka otu gị. Daalụ maka ide-elu 🙂
Mar 26, 2014 na 6: 34 AM
Yiri ka odi nma. Aga m anwale nke a mana ugbu a, m na-eji proofhub. Nke a bụ ngwa ọrụ kachasị mfe m jirila.